3 Days of Crazy Deals to Celebrates Banggood's XNUMXth Anniversary | Gam akporosis
Dbọchị 3 nke Crazy Deals iji mee ememme Banggood nke afọ iri na otu
Kwa izu anyị na-ewetara gị post na Onyinye dị elu sitere na ụlọ ahịa Banggood dị n'ịntanetị, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-enye nkwenye zuru oke na ngwaahịa ya na nnukwu nhọrọ ịzụta ngwaahịa sitere na China na ntanetị. Ọfọn, oge a ka m ga-ekwe ka onwe m okomoko nke na-ekere òkè na unu niile ihe mmezi post kemgbe Banggood na-eme emume ncheta afọ XNUMX ya Ọ ga-eme ya nnukwu maka ụbọchị atọ na-esote.
Bọchị 3 nke Crazy Deals iji mee afọ iri na otu ya na ahịa ịntanetị maka ire ere ngwaahịa sitere n'Eshia na, nke site na echi otu ụbọchị Septemba 7 na 10:00 nke ụtụtụ ruo elekere 10 nke ụtụtụ na Septemba 00. Oge Hong Kong (GMT + 10), ị nwere ike nweta teknụzụ ngwaahịa ị na-achọ na a karịa ihe na-akpali price na asịrị ego.
Buru n'uche na ọ bụrụ na ị bi n'ókèala Spanish 3bọchị 2 nke nzuzu na-amalite n'abalị a na XNUMXam na ha ga-ejedebe n’ime awa 72, ma ọ bụ otu ihe ahụ, n’ime ụbọchị atọ na Septemba 10 n’elekere abụọ nke elekere Spanish.
Ọ bụrụ na ọ dịlarị Bangood na-enye anyị onyinye a na-apụghị ịgbagha agbagha cheedị nke nwere ike ịkpọre site n’abalị a na nke a 3 ụbọchị crazy emekọ ọzọBịanụ, agaghị m anwa anwa hapụ ohere ịzụta nke gam akporo ama ma ọ bụ mbadamba nke m bu n'uche ruo ogologo oge.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnweta Banggood nkwalite ncheta afọ nke iri na otu ma sonye na ndị mbụ ga-abanye iji jide ndị chollazos niile anyị ga - enwe ike ịchọta site n’abalị a na elekere abụọ nke ụtụtụ, mgbe ahụ egbula oge na chekwaa na ọkacha mmasị njikọ m na-ahapụrụ gị n'okpuru usoro ndị a.
Nweta peeji nke nkwalite ụbọchị atọ nke onyinye nzuzu site na ịpị ebe a.
M hapuru gi ihe jikoro ya na a ndu ahia ka I wee mara otu aga esi gabiga ihe a niile mgbawa nke onyinye nke ahụ ga-adakwasị anyị n'ime awa ole na ole:
Accessnweta na Banggood ịzụ ahịa na-eduzi iji mee ememme ncheta 11th a.
Mee ngwa ngwa gaa ebe a Banggood si 11 ncheta ọ ga-enye ọtụtụ okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Dbọchị 3 nke Crazy Deals iji mee ememme Banggood nke afọ iri na otu
CAT S41, nke a bụ ekwentị ọhụrụ anaghị emebi emebi site na CAT
Esemokwu ya na igwefoto LG V30 nwere nkọwa dị mfe